US manala ny tarika, manidy ny fifandirana amin'ny patanty - ZD manam-pahaizana zoro
Home > US manala ny tarika, manidy ny fifandirana amin'ny patanty
Ahitsio: Denny　2019-12-30　Mobile
Vao haingana, i Etazonia dia namoaka ny lisitra fahatelo amin'ny fandroahana tariby tari-dàlana, nanambara ny famongorana ny tarif amin'ny vokatra vita amin'ny gorodona.
Ireo tranga roa lehibe ireo dia nanafoana ny tsy fahatokisana ny politika sy ny tsy fahatokisana ara-teknika miatrika ny fampivoarana ny elastika elastika amin'ny fotoana maharitra any aoriana.Tenaina fa ny trano farafara elanelana any Shina dia hitazona ny famokarana mafy sy ny fivarotana varotra mandritra ny roa na telo taona ho avy!
I. Ny fandroahana ny Tarifa dia manondrana any Etazonia.
Tamin'ny 7 Novambra 2019 dia namoaka lisitra fandroahana vaovao ny biraon'ny Birao Amerikanina momba ny varotra, nanambara fanodikodinam-bokatra momba ny vokatra sasany izay niharan'ny tarehin-javatra fanampiny hatramin'ny volana septambra 2018 (izany hoe, ny lisitry ny tarehimarika "US $ 200 miliara"). Nanomboka ny 24 septambra ka hatramin'ny 7 aogositra 2020, ny vokatra voaro dia misy ny gorodona elatra PVC, izay mifanandrify amin'ny US Customs Import Code 3911.10.1,000, izay mandrakotra ny ankamaroan'ny gorodona mifono vilia mavo.
Na dia tapitra ny 7 Aogositra 2020 aza ny fotoam-panafahana, ny manam-pahaizana manokana avy amin'ny Association dia manantena fa ny famonoana dia hitohy.
Satria rehefa nomen'ny tari-dàlan'ny US Representative Office ny tarif amin'ny entana sinoa, dia notanisaina ny fepetra izay ampiharan'ny orinasam-panjakan'i Etazonia amin'ny "alàlan'ny tari-dàlana." Ahitana lafiny telo ny famafana ny fepetra, izany hoe "raha toa ka manana loharanom-pahalalana hafa ivelan'ny any Sina ny vokatra dia", na ny tarif dia hanimba tanteraka ny tombontsoan'ny orinasam-panjakan'i Etazonia na ny U.S. fampiharana ny fampiharana "," na ny vokatra dia mifandraika amin'ny drafitry ny indostrian'i Shina. Misy dikany stratejika manan-danja izany. "
Raha jerena fa maherin'ny 90% amin'ireo gorodona elastika any Etazonia no ampidirina avy any Sina, dia mifandray akaiky amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjono amerikana sy ny tombontsoan'ny mpaninjara sy mpivarotra amerikanina izy io, ary tsy hitranga ao anatin'ny volana vitsivitsy ity fanjakana ity. Fanovana lehibe.
Noho izany dia mitombina ny mino fa aorian'ny faran'ity vanim-potoana fanalana ny fandroahana ity dia mbola hisy ihany ny fandefasana hazakazaka elastika hatrany.
US manala ny tarika, manidy ny fifandirana amin'ny patanty Ny atiny mifandraika